पुर्व प्रेमिकालाई पल शाहको यस्तो सन्देश, यसरि छुटेको रहेछ ४ बर्षको प्रेम (भिडियो सहित) – Classic Khabar
August 14, 2021 110
महामारी होस् वा प्राकृतिक विपत्ती अभिनेता पल शाह सहयोगका लागि संधै अगाडी आउँछन् । उनै नायक पल शाह विपत्तीमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न मुलुकभर पुगेका छन् । उनी काठमाडौमा भोकाहरुलाई खाना खुवाउने अभियानमा सकृय छन् भने प्राकृतिक विपत्तीमा परेकाहरुलाई सहयोग लिएर पुग्छन् ।
हाम्रो टिम नेपाल र पल शाह फाउण्डेशन मार्फत उनी सामाजिक काममा सकृय छन् । उनलाई रिल लाइफमा मात्र नभएर रियल हिरो भन्न थालिएको छ । उनलाई रियल हिरो अफ दि इयरबाट सम्मानित गरिएको छ । रजतपट समुहले उनलाई रियल हिरोको रुपमा सम्मान गरेको हो । ल्यामर गफ उनकै अन्तरवार्तावाट सुरु भएको थियो । प्रकाश सुवेदीले अहिले पनि उनलाई नै अतिथीका रुपमा निम्ता दिए ।
पल शाहले राजनीतिक दलका नेता भन्दा पूर्वराजालाई मन पराउँछन् । उनले एउटा घरमा एउटा मात्र अभिभावक हुँदा राम्रो हुने भन्दै नेपालमा अहिले धेरै अभिभावक बन्न खोज्दा जनताले दुख पाएको बताए । उनले पूर्वराजालाई विष्णु भगवानका रुपमा आफुले बाल्यकाल देखिनै मान्दै आएका कारण आफु राजाकै पक्षमा रहेको बताए । मुलुकमा तँ भन्दा मँ के कम ? भन्ने सोँच राजनीतिक दलहरुमा भएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
उनले आफुले अब छिटै विवाह गर्ने पनि बताएका छन् । परिवारमा अप्रत्यक्ष रुपमा विवाहको कुरा उठ्ने गरेको पनि बताएका छन् । जिवनको तेस्रो दशकमा रहेका उनी आफ्नो जिवनमा कसैलाई माया भने गरेको बताए । तराई टिभीमा काम गर्दा सहकर्मीलाई आफुले निकै मन पराएको भएपनि केही महिना मात्र रहेको बताए । त्यसपछि अर्कोसंग दोहोरो प्रेम भएपनि त्यो प्रेम पनि छुटेको बताए ।
आफुले मन पराएको ब्यक्तिसंगको प्रेम सफल हुन नपाएपछि निकै दुखी भएको बताए । एक अर्कालाई बुझ्न नसकेका कारण दोहोरो प्रेम छुटेको उनले बताए । पहिलो पटक उनले आफ्नो प्रेमको बारेमा बताएका छन् । उनले केही वर्ष (चार वर्ष) प्रेम चलेको र त्यो छुट्दा निकै दुखी भएको बताए । उनले आफ्नो पूर्व प्रेमीकालाई सन्देश दिँदै भने, अब फर्केर नआउ जहाँ छौ त्यतै खुसी रहनु । म यतै खुसी छु ।
Prevनायिका आँचल शर्माले श्रीमान कै आगाडी आफ्नो सासु र नन्द ,आमाजुको पोल खोले पछी उदिप हेरे को हेरै भए , कार्यक्रममै आँचलले श्रीमान र परिवारको खोलिन भित्रि रहस्य (भिडियो)
Nextशोभित बस्नेतको चलचित्र ‘डाँडाको बरपीपल’मा अभिनेता भुवन केसी र शिव श्रेष्ठ संगै आभिनय गर्दै
हामी यसरी भोक भोक्कै कति दिन सम्म बस्ने ? सहयोगको खानेकुरा लिएर बाड्न जादा देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो सहित)
पूर्वरानी कोमल र नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्यको पछिल्लो अवस्थाबारे अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी
यसरी गरियो सुजिता भण्डारीको दाहसंस्कार, आमा र दिदिको रोदनको हृदयविदारक दृश्यले सबैको आखा रसायो
प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा (702)
ओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ ! (569)
जस्तो गुरु तेस्तै चेला हुन किशोर खतिवडा,लक्ष्मीको कुनै हैसियत छैन श्रीजना वाग्लेलाई जथाभाबी भन्ने (भिडियो सहित) (557)